gmail virus အသစ်လား ? — MYSTERY ZILLION
gmail virus အသစ်လား ?
ကျွန်တော်ဆ၇ာမတယောက်စက်ထဲမှာ virus တခု၀င်နေတယ် မေးထဲကလင့်တခုကနေ၀င်တယ်ပြောတာပဲ
gtalk ၇ုိက်လိုက်တယ်ဆို၇င် ကိုယ်၇ုိက်လိုက်တဲ့စာနောက်
nice to meet you, girl gmail acc pay mal lay der ma add lite
add lite naw lksdf-weot=ew-or=-worjvlkcuiwwqjrojvlsanklqowik
အဲလိုတွေလျှောက်ပေါ်တယ် taskmanager,registery,၀င်လို့မ၇တော့ဘူး။kaspersky 8 မသိပါ။
kasper2010 နဲ့သတ်လို့ရပါတယ်အစ်ကို အိမ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘဲရှင်းခဲ့တာပါ
ကျနော်ကတော့ အဲဒါ chrome လို့ ထင်ပါတယ် ကျနော့်စက်ထဲမှာလည်း ၀င်ခဲ့တယ် ဗျ .. ကျနော်က တော့ safemode ကနေ လိုက်သတ်တယ် ရပါတယ် ခင်ဗျ ရှင်းသွားတယ် နောက် avast version4တင်ထားလိုက်တယ် အိုကေသွားတယ် ဗျ ... စမ်းကြည့်ပါဦး နော်.. registry and task manager ကတော့ win+R.>gpedit.msc>user configuration>administrative template>System>
ထဲမှာ ပြန်ပြင်လို့ ရပါတယ် registry အတွက် ... prevent access to registry editing tool ကို disable ပေးလိုက် ရင်ရပါတယ် taskmanager အတွက် ကတော့ ..........administrative template>System>ctrl+alt+del option > ထဲက remove task manager ကို disable လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ် ခင်ဗျ ... .
သိသလောက်လေးပါ ... ေ၀မျှတာပါ ..
အဲဒါ loikaw vious ပါ ကျွန်တော်ဘ၀မှာပထမဆုံးသတ်ဖူးတဲ. ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေလို. သူ.ကိုကျွန်တော်ကောငး်ကောငး်မှတ်မိပါတယ်။
သူရေးသွားတဲ.စာတွေကို ဒီမှာသွားကြည်.လိုက် အကို။သူ.ကို ဗျင်း ချင်ရင် ဒီမှာသွားကြည်.လိုက်ပါနော်။အဲဒီက ဆော.၀ဲယားကို ယူပြီး run လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ကွန်ပျုတာကို restat လုပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ်.မယ်။
ဟုတ်လောက်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်က ကောင်မလေးပုံပေါ်မလာသေးလို့ လွီူင်ကော်မဟုတ်ဘူးထင်တာ
စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ private cam ကိုပဲ ဖြစ်တွင်းကထပ်ကလိတယ်ထင်လို့